Nhau - Chii chinonzi tanker subsea vharafu
Chii chinonzi tanker subsea vharafu
Tanker subsea mavharuvhu anonziwo pneumatic mavharuvhu, pneumatic subsea mavharuvhu, emergency mavhavha, uye echimbichimbi kuvhara-kure mavharuvhu. Sezvo paive nenjodzi dzekumhanya-mhanya uye dzemumugwagwa nenjodzi dzemotokari dzinotakura zvinhu muChina muna 2014, madhipatimendi akakodzera akasimbisa manejimendi evagadziri vemotokari dzematangi senge matangi emafuta, uye GB 18564.1 yakapihwa neMobile Pressure Vessel Subcommittee yeNational Pressure. Vessel Standardization Committee －2006 "Tank Vehicles for Road Transport of Liquid Dangerous Goods Part 1: Technical Requirements for Metal Atmospheric Tanks" inonyatsotsanangura kuti mavharuvhu ekuvharisa echimbi-chimbi anofanira kuiswa pazasi petangi kuitira mugwagwa kutakura zvinhu zvine ngozi zvemvura.
Iyo ngarava yegungwa yepasi pemvura haingori chete chiteshi chinoshandiswa netangi kutakura uye kuburitsa mafuta, asi zvakare chinhu chepakati chinodzora on uye kubvisa kwetunhu remafuta. Inonyanya kuverengerwa nehombodo, yekuisa chisimbiso mashini, yekudzivirira mashini, tangi yekubatanidza flange uye inoburitsa flange. Iyo yekuisa chisimbiso mashandiro akaiswa mumutangi wemutumbi panguva yekumisikidza uye yakabatana kune tangi yepasi ndiro kuburikidza netangi yekubatanidza flange; Iyo michina inoshandisa yakasimba simba yesimbi isina simbi chitubu kuti iite axial otomatiki yekuisa chisimbiso kuitira kuti pasi vharafu iri mune yakajairika yakavharwa nyika; kuvhura nekuvhara mashandiro anoitwa kuburikidza neanodzora mashandiro.
Kana simba rekunze risina kuenzana rakasimudzwa, iyo yemukati tsime uye vharuvhu inogona kukonzerwa, nokudaro ichicheka pombi yemafuta mukati me10S, ichichengetedza kuchengetedzeka kwepakati mumotokari, kudzivirira kuvuza, kuvesa, uye kuputika; kuchengetedza shamwari dzemutyairi, zvinhu zviri mumota, uye zvinoenderana kunze kwemota Kudzivirirwa uye kuchengetedzwa kwehupenyu!
Post nguva: Aug-03-2020